Yakachipa OEM Valve uye fekitori yakakodzera uye vatengesi Ouzhan
OEM yendarira Valve uye inokodzera kwekuchengetedza zvikamu-zvakaringana ndarira yekugadzira yekugadzirisa michina zvikamu
Brass chiwanikwa chakaumbwa nemhangura uye zinc, uye chinhu chakanakira kugadzira zvigadzirwa zvemuchina (kusanganisira zvikamu zvekugadzira). Kufa kukanda kunopfupikiswa sekugadzira, inova nzira yekukanda iyo yakanyungudutswa chiwanikwa mvura inodururwa mukamuri yekudhinda, iyo mhango yesimbi muforoma inozadzwa nekumhanyisa, uye iyo alloy mvura inosimbiswa pasi pekumanikidzwa kuti iite kukanda. Kubatsira kwaOuzhan kwagara kuri kugadzirisa mavharuvhu emhangura, ndiko kuti, mavhavha akagadzirwa nemhangura, ari zvikamu zveindasitiri. Maitiro ekugadzira akatanga kugadzirwa naNingbo, Zhejiang kuChina. Mukutanga kwema1980, Ningbo, dunhu reZhejiang rakatungamira mukuvandudza maitiro ekugadzira, akachinja nhoroondo refu yekushandisa mavhavha esimbi muChina. In mukugadzira muitiro, jecha Kudzingwa Kuumbwa kwacho kwakatanga kugamuchirwa, uye nokuchengetedza muitiro rakachinjwa mukutanga kuma1990. Kubudirira kusvika pakutanga kwezana ramakumi maviri nemasere, China yakagadzira kuve yepasi rese mhangura yekugadzira vharuvhu Ouzhan ine mukana wakakwana mukugadzira mavharuvhu endarira, ayo anotengeswa pasi rese.
Ouzhan Valve fittings uye Pipe fittings zvakagadziriswa zvikamu zvinoratidza
Zvakanakira Shanghai Ouzhan nendarira ndokugadzira zvikamu:
-Superior kusununguka kwekugadzirisa
-Good zvemuchina zvivakwa uye processability
Yakagadziriswa yendarira Valve fittings uye Pipe fittings yekugadzira zvemishini zvikamu
Mashoko Brass, Stainless simbi, kabhoni simbi, nezvimwe. Yakanyanya kukurudzirwa yendarira
Surface kurapwa Pamusoro pemvura kurapwa kwendarira kunogona kugadziridzwa zvinoenderana nezvaunoda, senge electroplating maitiro, goridhe yekumhanyisa maitiro, yekuveza maitiro, electrolysis
Maitiro makuru Nokuchengetedza kugadzira
Kushandisa Kupa mvura uye mapaipi ekudhirowa, mapaipi akakomberedzwa, mapaipi enyoka, mapaipi ekudzora, bullet casings uye dzakasiyana siyana dzakaomarara zvigadzirwa zvekubaya, zvidimbu zvehardware, nezvimwe.
Pashure: Chinese inogadzira cnc tsika kabhoni simbi yakagezwa zvikamu